भारतमै ‘ह्यासट्याग गो ब्याक मोदी’ ट्रेंडिङ, को हुन मोदीको अपमान गर्नेहरु ? — Motivatenews.Com
भारतमै ‘ह्यासट्याग गो ब्याक मोदी’ ट्रेंडिङ, को हुन मोदीको अपमान गर्नेहरु ?
काठमाडौं – भारतको एउटा प्रान्तमा मोदीलाई देखि सहदैन्न । भारतभर मोदी लहर छाएको समयमा एउटा राज्यमा भने उनको नाम पनि सुन्न चाहादैनन् । तमिल नाडूमा मोदीको नाम त उनको कार्यक्रम पनि बहिस्कार गर्ने गरिएको छ ।
देशको बाँकी भागमा भाजपा लहर आउँदा तमिल नाडूमा भने भाजपाले यस पटक एक सिट पनि जित्न सकेन । योसँगै तमिलनाडूमा पकड जमाउने भाजपाको सपना पुनः एक पटक असफल भएको छ ।
निर्वाचन अघि तमिल–नाडूमा नरेन्द्र मोदीविरुद्ध जुन लहर छ भन्ने जुन धाराणा थियो त्यो वास्तविक भएको संकेत गरेको छ । मतपरिणाम घोषणा हुनु केही घण्टा पनि तमिल ट्वीटर प्रयोगकर्तामाझ ‘ह्यासट्याग गोब्याक मोदी’ टे«ण्डमा थियो । परिणामले त्यो मानसिकता समाजिक सञ्जालबाट यथार्थमै परिणत भएको छ ।
भारतको बाँकी सबै ठाँउमा भाजपाका उम्मेद्वारले जितेका छन् । हार्दा पनि थोरै मतान्तरमा हारेको देखिन्छ । तर तमिल नाडूमा भने अन्त सम्भव नभएको कुरा देखियो ।
यस निर्वाचनमा भाजपाले तमिल मतदातालाई प्रभावित पार्नको लागि कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । फेब्रुअरीदेखि अप्रिलबीच मोदीले मात्रै चार पटक तमिल नाडू प्रदेशको भ्रमण गरे । तर यति प्रयासको बावजुद भाजपाले सन् २०१४ मा कन्याकुमारीबाट जितेका सांसद ‘पोन राधाकृष्णनन’लाई पनि पुनः जिताउन सकेन ।
भाजपाले उठाएका पाँचै जना उम्मेद्वारले लाखभन्दा बढीको मतान्तरले हारेका छन् । यस्तो जित भारतभरमा ‘तमिल नाडूमा मात्र सम्भव’ देखियो ।